China Glass sakafo siny Factory, Glass sakafo siny mpamatsy
3,9 litatra fitaratra mazava fitehirizana siny hoditra tsy misy rivotra miaraka amin'ny tombo-kase fingotra sarony fitaratra lehibe fitoeran-dakozia fitehirizana fitoeran-javatra ho an'ny sakafo pantry
Ny tavoahangy fitahirizana dia vita amin'ny vera matevina matevina avo lenta, tsy manahy momba ny fahatapahan'ny tombo-kase.
Ny haavon'ny siny lehibe dia 26cm (10.4in), ny savaivony dia 18cm (6.4in), ary ny fahafahan'ny fitoeran-javatra fitahirizana dia 3.9 Litre. Izy io dia lehibe ampy handrakofana ny sakafo ilainao isan'andro fitehirizana entana.
Ny siny fitehirizana fitaratra kristaly mazava dia azo ampiasaina amin'ny fitehirizana voa, voa, kafe, lafarinina, siramamy, mofomamy, vatomamy, sôkôla na mamy, ary azo ampiasaina ho tavoahangy fampirantiana ao an-tranonao, birao, kafe ary trano fisakafoanana.
AZA ATAO AMIN'NY HAmandoana ny sakafonao- Ny siny lehibe tsy misy rivotra dia voaisy tombo-kase tsara amin'ny sarony, arovy ny zavatra fitahirizanao mba tsy ho levona.
SERVICE AFAKA - Asedraina mafy ny entanay, raha toa ka misy olana na fanontaniana momba ny vokatray ianao dia aza misalasala mifandray aminay. Fadio ny fanadiovana amin'ny maripana ambony aorian'ny vata fampangatsiahana (fiitarana amin'ny hafanana sy ny fihenan'ny hatsiaka)
zava-pisotro misy tavoahangy vera, Tavoahangy Saosy Glass Bbq, tavoahangy ranom-boankazo, siny fitaratra ho an`ny ranom-boankazo, tavoahangy diffuser volotara, tavoahangy vera labiera,